Iithegi ze-RFID ezihlambekayo ziya kuwugqiba ngokulula umsebenzi wokuhlamba
TM Ithegi/ibhanti yesihlahla
13.56mhz ISO14443A Ufikelelo C...
Iplastiki yoshicilelo eyenzelwe wena...
Yenziwe ngokwezifiso iPVC yePVC yeNFC ...
I-Microchip encinci encinci kwi-meta...
Ukusetyenziswa kwe-RFID kudlala indima ebalulekileyo ekuchongeni nasekulawuleni iimpahla. Itekhnoloji ye-UHF RFID isetyenziselwa ukuqonda ulawulo olusebenzayo lokuqokelela ngokukhawuleza, ukuhlela, uluhlu oluzenzekelayo, kunye nokuqokelela kwishishini lokuhlamba impahla, eliphucula kakhulu ukusebenza kakuhle kunye nokunciphisa amazinga eempazamo. Ulawulo lwelinen ye-RFID ngokufakela iithegi ze-RFID zokuhlamba iimpahla, ukusetyenziswa kwe-RFID countertop, i-handheld, abafundi abasisigxina kunye nezinye iindlela zokulawula ezihlakaniphile ezichonga ngokuzenzekelayo inkqubo nganye yokulawula, ukwenzela ukuba ilinen yelinen ikwazi ukulawulwa ngcono. Ngelaphu le-RFID ye-UHF engangeni manzi ngelaphu le-Laundry Tag, ukusetyenzwa kwakhona okudityanisiweyo, ulungiselelo kunye nokwamkelwa kugqitywe ngokuchanekileyo, nto leyo ephucula kakhulu ulawulo olumanyeneyo.
Intshayelelo kwinkqubo yomsebenzi
1. Ulwazi lweleyibhile erekhodiweyo kwangaphambili
Kuyimfuneko ukusebenzisa umsebenzi wokurekhoda kwangaphambili ukubhalisa ulwazi lwempahla ngaphambi kokuba iimpahla zihanjiswe ukusetyenziswa. Umzekelo, bhalisa olu lwazi lulandelayo: inombolo yempahla, igama lempahla, icandelo lempahla, isebe lempahla, umnini wempahla, amagqabantshintshi, njl.
Emva kokurekhoda kwangaphambili, lonke ulwazi luya kugcinwa kwisiseko sedatha. Ngelo xesha, umfundi uya kurekhoda iilebhile kwiimpahla zokuhlolwa kwesibini kunye nokulawulwa kokuhlelwa.
Iimpahla ezirekhodiweyo zingahanjiswa kuwo onke amasebe ukuze zisetyenziswe.
2. Ukuhlelwa kokungcola kunye nokugcinwa
Xa iimpahla zithathwa kwindawo yokuhlamba impahla, inombolo yeleyibhile kwiimpahla inokufundwa ngumfundi osisigxina okanye ophathwa ngesandla, kwaye ke ulwazi oluhambelanayo lunokubuzwa kwi-database kwaye luboniswe kwisikrini ukuze uhlele kwaye uhlolisise iimpahla.
Apha unokujonga ukuba ngaba iingubo ziye zabhalwa kwangaphambili, nokuba zibekwe kwindawo engafanelekanga, njl. Emva kokuba umsebenzi wogcino lugqityiwe, inkqubo iya kurekhoda ngokuzenzekelayo ixesha lokugcina, idatha, umqhubi kunye nolunye ulwazi, kwaye ngokuzenzekelayo. printa ivawutsha yokugcina impahla.
3. Ukuhlela kunye nokukhulula iimpahla ezicocekileyo
Kwiimpahla ezicociweyo, inombolo yeleyibhile kwiimpahla inokufundwa ngumfundi osisigxina okanye ophathwa ngesandla, kwaye ke ulwazi oluhambelanayo lunokubuzwa kwi-database kwaye luboniswe kwisikrini ukuze uhlele kwaye uhlole iimpahla. Emva kokuba umsebenzi ophumayo wesistim ugqityiwe, ixesha eliphumayo, idatha, umsebenzisi kunye nolunye ulwazi luya kubhalwa ngokuzenzekelayo, kwaye ivawutsha ephumayo iya kuprintwa ngokuzenzekelayo.
Impahla ehleliweyo ingahanjiswa kwisebe elihambelanayo ukuze lisetyenziswe.
4. Ukuvelisa ingxelo yocazululo lwamanani ngokwexesha elichaziweyo
Ngokweemfuno zabathengi, idatha egcinwe kwisiseko sedatha ingasetyenziselwa ukuvelisa iingxelo ezahlukeneyo zokuhlalutya eziluncedo ekuphuculeni umgangatho wolawulo lwegumbi lokuhlambela.
5. Umbuzo wembali
Unokubuza ngokukhawuleza ulwazi olufana neerekhodi zokuvasa iimpahla ngokuskena iilebhile okanye ngokufaka amanani.
Le nkcazo ingentla sesona sicelo siqhelekileyo sokuhlamba impahla, iinzuzo eziphambili zezi:
a. Ukuskena ibhetshi kunye nokuchongwa, akukho scanning enye, ilungele ukuhanjiswa ngesandla kunye nomsebenzi wolawulo, kulula kwaye kuyakhawuleza ukuyisebenzisa;
b. Ukuphucula ukusebenza kakuhle kunye neenzuzo zoqoqosho, ukonga iindleko zabasebenzi kunye nokunciphisa iindleko;
c. Rekhoda ulwazi lokuhlamba impahla, wenze iingxelo ezahlukeneyo, ubuze kwaye ulandelele ngokwembali kwaye uprinte ulwazi olufunekayo nangaliphi na ixesha.
Ithegi ye-elektroniki efana neqhosha (okanye i-label-shaped) ithungelwa kwisiqwenga ngasinye selinen. Ithegi ye-elektroniki inekhowudi yokuchongwa yelizwe jikelele, oko kukuthi, isiqwenga ngasinye selinen siya kuba nophawu lolawulo olulodwa kuze kube yilapho ilinen ichithwe (iileyibhile Ingaphinda isetyenziswe, kodwa ayidluli ubomi benkonzo yelebula ngokwayo). Kulo lonke usetyenziso lwelinen kunye nolawulo lokuhlamba, isimo sokusetyenziswa kunye namaxesha okuhlamba iilinen zirekhodwa ngokuzenzekelayo nge-RFID reader. Ixhasa ukufundwa kwebhetshi yeelebhile ngexesha lokuvasa ukunikezela, ukwenza ukuhanjiswa kwemisebenzi yokuhlamba kube lula kwaye kucace, kunye nokunciphisa iingxabano zoshishino. Ngexesha elifanayo, ngokulandelela inani lokuhlamba, liyakwazi ukuqikelela ubomi benkonzo yelinen yangoku kubasebenzisi kunye nokubonelela ngedatha yokubikezela kwisicwangciso sokuthenga.
The bhetyebhetye UHF RFID UHF ilaphu Textile Laundry Tag
inokuqina kwe-auto claving, ubungakanani obuncinci, obunamandla, ukuchasana kweekhemikhali, ukuhlamba kunye nokucoca okomileyo, kunye neempawu zokucoca ukushisa okuphezulu. Ukuyithunga kwiimpahla kunokuncedisa ukuchongwa okuzenzekelayo kunye nokuqokelela ulwazi. Isetyenziswa ngokubanzi kulawulo lokuhlamba impahla, ulawulo lwerenti efanayo, ukugcinwa kwempahla kunye nolawulo lokuphuma, njl., Ukunciphisa iindleko zabasebenzi kunye nokuphucula ukusebenza kakuhle. Ifanelekile ukusetyenziswa ngokukrakra kwizibhedlele, iifektri, njl. Indawo efunekayo.
Ixesha lokuposa: May-20-2021